शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति हुनुपर्छ ? यस्तो छ विज्ञहरुको सुझाव – Satyapati
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति हुनुपर्छ ? यस्तो छ विज्ञहरुको सुझाव
काठमाडौं । सामान्यतया स्वस्थ मानिसको शरीरमा ९५ प्रतिशत अक्सिजनको मात्रा हुन्छ । ९५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा अक्सिजन दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘९२ सम्म ठीकै हो तर ९० भन्दा तल झर्यो भने राम्रो मानिँदैन, तत्काल अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ’, मुटुरोग विशेषज्ञ डा.राजेन्द्र कोजू भन्छन् । हावामा २१ प्रतिशत अक्सिजन हुन्छ ।
त्यही अक्सिजन फोक्सोको माध्यबाट शरीरका अंगहरूमा पुग्ने हो । ‘हावाबाट लिएको अक्सिजनले स्वस्थ मानिसले ९५ प्रतिशत मेन्टेन गर्ने हो’, डा. कोजू भन्छन्, ‘फोक्सो, मुटु र रगत खराब भयो भने बाहिरको २१ प्रतिशतले शरीरमा ९५ प्रतिशत पुर्याउन सक्दैन । थप ४० प्रतिशतसम्म अक्सिजन दियो भने स्याचुरेसन ९५ पुग्न मद्दत गर्छ ।’
कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले फोक्सोमा बढी असर गरेकाले अक्सिजन दिनुपरेको डा. कोजू बताउँछन् । ‘अक्सिजन दिएर नै फोक्सोको रोग निको हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘फोक्सोको रोग निको हुन कोभिड लाग्नै नदिने हो । कोभिडका बिरामीको अक्सिजनको लेभल घटेर ५०–६० मा समेत झर्ने गरेको छ । अक्सिजनको लेभल यतिधेरै झर्नु भनेको ज्यान जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले बाहिरबाट थप अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ ।’
शरीरमा अक्सिजन कति छ, कसरी थाहा पाउने ?
शरीरमा अक्सिजन कति छ भनेर आफैँ पनि हेर्न सकिन्छ । ‘पल्स अक्सिमिटर ल्याएर शरीरमा कति अक्सिजन छ हेर्न मिल्छ,’ डा.कोजू भन्छन्, ‘कोरोना पोजिटिभ आएको छ भने अक्सिजन ९२ भन्दा कम भएमा अक्सिजन आवश्यक पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल अस्पतालमा डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ ।’
अक्सिजनको मात्र कसरी बढाउने ?
फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न शारीरिक क्रियाकलाप गर्नुपर्नेमा डा.शेरबहादुर पुन जोड दिन्छन् । ‘धूम्रपान, मध्यपान, धुलो धुँवाबाट जोगिनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशस्त पानी पिउने, झोलिलो पदार्थमा बढी जोड दिने, खुल्ला ठाउँमा बस्ने र लामो सास लिने हो भने अक्सिजनको मात्र शरीररले पाउँछ ।’
गलत अक्सिजन प्रयोग भएको त छैन ?
इलेक्ट्रिक मेसिन अक्सिजन (अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर) भारत लान थालिएको व्यवसायीको गुनासो छ । अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भारतबाट आएर लान थालेका छन्,’ अक्सिमेड ट्रेड लिङ्कका सीइओ सुनील श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यहाँ ७५ हजार रुपैयाँमा किनेर उता ७५ हजार भारुमा बेच्न थालेका छन् ।’
अक्सिजनसँग सम्बन्धित नभएकाले पनि व्यापार सुरु गरेको उनी बताउँछन् । ‘जुत्ता, चप्पल, लुगा व्यापार गर्नेले पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बेच्न थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो स्वास्थ्यको संवेदनशील विषय हो । ज्ञान नभएकाले काम गर्दा के होला ?’ कन्सन्ट्रेटर दुई किसिमको हुने भएकाले नझुक्किन उनले आग्रह गरे ।
‘एउटा मेडिकल प्रयोगका लागि हुन्छ । अर्को हेल्थ प्रयोगका लागि हुन्छ । मेडिकल्ली ९० प्रतिशतभन्दा माथि अक्सिजन दिने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हेल्थका लागि प्रयोग गर्नेको क्वालिटी पनि कम हुन्छ । स्वस्थ मानिसलाई तनाव भयो भने रिल्याक्सका लागि लिने हो । २१ प्रतिशतभन्दा कम भएको ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
हेल्थमा प्रयोग गर्ने पनि मेडिकलमा प्रयोग गर्न थालिएको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई उनले आग्रह गरे । ‘मेसिन आउने भनेको चीन र अमेरिकाबाट हो । यहाँ जर्मनीको भनेर पनि बेच्न थालिएको छ । जर्मन कम्पनीको यहाँ छैन’, उनले भने, ‘हेल्थमा प्रयोग गर्ने मेसिन मेडिकलमा प्रयोग गर्दा बिरामीलाई अक्सिजनको मात्रा पुग्दैन ।’
के हो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ? कसरी बन्छ अक्सिजन ?
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एउटा मेसिन हो । कन्सन्ट्रेटरले बाहिरको हावालाई फिल्टर गर्छ । एकातिरबाट अक्सिजन र अर्कोतिरबाट नाइट्रोजन फाल्छ । यसबाट बिरामीले अक्सिजन प्रयोग गर्छन् । अर्को लिक्विड प्लान्टबाट अक्सिजन बनाइन्छ ।
लिक्विड प्लान्टमा हावालाई चिसो बनाइन्छ । धेरै चिसो भएपछि लिक्विडको लेयर बन्छ, एउटा अक्सिजनको अर्को नाइट्रोजनको । त्यसबाट अक्सिजनको लेयरलाई लिएर फर्मेसन गरिन्छ । अनि अक्सिजन सिलिन्डरमा भरेर बिरामीका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
कस्तो अक्सिजन प्रयोग गर्ने ?
विज्ञहरुका अनुसार उत्पादन भएको सिलिन्डरको अक्सिजन नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । अक्सिजन प्लान्ट, लिक्विड प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिनबाट अक्सिजन दिइन्छ । कन्सन्ट्रेटरमा शतप्रतिशत अक्सिजन नहुन सक्छ । उत्पादन भएको सिलिन्डरको अक्सिजन नै उपयुक्त हो । गुणस्तरीय अक्सिजन हुनुपर्छ ।
युरोपियन सी, डब्लूएचओमा लिस्ट भएको मात्र प्रयोग गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ । एक मिनेटमा १५–२० लिटर फाल्ने हाइ फ्लो अक्सिजन फाल्ने मेसिन किन्न सबै निकायलाई विज्ञहरुको सुझाव छ । हाइ फ्लो अक्सिजनको व्यवस्था भयो भने कोभिडका बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्दैैन । भेन्टिलेटर महंगो पनि पर्छ ।
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि हाई फ्लो फाल्ने मात्र खरिद गर्न आग्रह गर्दै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सामान्य सास फेर्न गाह्रो भएकालाई दिने मिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् । फोक्सो ठिक छ तर विभिन्न कारणले समस्या भएको छ, दमको बिरामीलाई सर्पोट चाहिएको छ भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रयोग गर्न सकिने विज्ञ डाक्टरहरु बताउँछन् ।